GUNSHAT BATTLE: Helicopter 3D APK Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » လက်နက်ကိုင် Battle: ရဟတ်ယာဉ် 3D
လက်နက်ကိုင် Battle: ရဟတ်ယာဉ် 3D APK ကို
★★★ 70 သန်း downloads, !!! ★★★
သင့်ရဲ့မစ်ရှင်ဖြည့်စွက်ရန် rotary နှင့် fixed-တောင်ပံ VTOL လေယာဉ်ပျံအမျိုးမျိုးကနေရွေးချယ်ပါ။
「လက်နက်ကိုင် Battle 」လေယာဉ်ထိန်းချုပ်မှုခြင်း simulation နှင့်အတူရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ဂရပ်ဖစ်ပေါင်းစပ်ကာစွဲငြိဖွယ်ရာတိုက်ခိုက်ရေးအတွေ့အကြုံကိုသို့သင်ကစားပွဲကိုစတင်ရန်ယခုအချိန်တွင်သင်ဆွဲထုတ်ဖို့စစ်ရေးအခြေအနေတွေပါဝငျတဲ့ရဟတ်ယာဉ်အရေးယူဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
【 အင်္ဂါရပ်များ 】
★ 3D လေယာဉ်ခရီးစဉ်များအတွက် optimized ထိန်းချုပ်မှုခံစားပါ။
စစ်မှန်သောဘဝပဋိပက္ခများအားဖြင့်မှုတ်သွင်းအပိုင်း mode မှာ★အပြီးအစီးမစ်ရှင်။
★ဒါ့အပြင်တက်ဘလက် device များအတွက် optimized ။
သငျသညျ FPS, သေနတ်ပစ်, ဒါမှမဟုတ်ပြိုင်ကားဂိမ်းပျော်မွေ့နေလျှင်, ဤသူသည်သင်တို့အဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ကိုယ်တိုင်ပြင်းထန်သောကျည်ဆန်မှန်ကိုဖြတ်ပြီးမိုဃ်းတိမ်မှတဆင့် whirling ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
"ပျော်စရာနှင့်ဗာရုတ်ဟာသူ့အတွက်" - Pocketmeta
"လထွက်ရှိမည်သည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကစားသမားများအတွက်သင့်လျော်" - Appzoom
"ဟုအဆိုပါအမျိုးအစား၏ပရိသတ်များဒီဂိမ်းကြိုးစားသင့်" - Appgamer
ဒီဂိမ်းကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့အချို့ကိုသင် In-ဂိမ်းပစ္စည်းများများအတွက်အမှန်တကယ်ပိုက်ဆံဆပ်ဖို့ရွေးချယ်နိုင်သည်။ တချို့ပေးဆောင်ပစ္စည်းများကို item အမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အမ်းမကျမည်အကြောင်းသတိပြုပါ။
155.91 ကို MB
Download ပု ...